Ciidama dheerad oo boolis ah oo la geeyay kerio valley – The Voice of Northeastern Kenya
Ciidama dheerad oo boolis ah oo la geeyay kerio valley
Ciidama boolis oo dheerad ah ayaa la geeyay deeganka kerio Valley ee hoostaga countiga Marakwet si ay halkaas rondo uga sameeyan taas oo ay ku raadin doonan burcad halkaas 3 qof laba isbuuc ka hor ku dishay.
Xildhibaanka laga soo doorto deeganka bariga Marakwet Kangogo Bowen ayaa maanta sheegay in halkaas la geeyay ciidamo dheerad ah oo ah kuwa GSU-da si ay u bacsadaan burcada countigaas ka geeysata dilalka.
Xildhibaanka ayaa sheegay in u doonayo in ciidamadda ay goob ka deegan xuduudka u dhexeeya Pokot iyo bariga Marakwet oo ay weerarada soo noq noqdo ee dadka dilalka loogu geeysto ay ka dhacaan.
Burcada weerarada ka geeysata deegankaas ayaa waxa la sheegay in ay afar qof deeganka Kaben ku dhaawaceen xili ay weerar ku qaaden.
Habeenka talaadada ayay burcadan rasaas ku fureen dad malab goosanaayay wallow aysan jirin ciid wax ku noqotay rasaasta waxana ay dhacdadaan daba socotay hal maalin kadib marki u halkaas booqasho ku tagay taliyaha ciidamadda booliska dalka Joseph Boinnet.
← Dad kor u dhaafaya 20 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay masaajid ku yaala dalka Pakistan
Aden Bare oo ugu baaqay Peter Munya in u ku biiro xisbiga Jubilee →